Forex ပညာရေးဆိုင်ရာ eBooks - တစ်အခမဲ့ Forex Trading ၏ eBook Download
တစ်ဦးအခမဲ့ Forex eBook Download
FXCC ပေး Forex eBooks ၏ပြီးပြည့်စုံသောအစုအဝေး။ မသက်ဆိုင်အတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့အဆင့်အားလုံးကုန်သည်များအဘို့အသင့်လျော်သောလူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းပညာရေးအရင်းအမြစ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။
တစ်ခုချင်းစီကို eBook သင်သော့ကိုကုန်သွယ်သဘောတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်နှင့်သင့်တဦးချင်းရည်မှန်းချက်များ လိုက်. တစ်ဦး Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာဖန်တီးကူညီပေးသည်သည့်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ပညာရေးအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် FXCC, အခမဲ့အသီးအသီး eBook ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါညာထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာသင့်ရဲ့လူနေမှုပုံစံကိုက်ညီ DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
ဤသည် eBook ကုန်သွယ်ရန်သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုက်ညီ၏ဒဏ္ဍာရီကိုချိုးဖောက်အာရုံစိုက်။ အမှန်တကယ်ကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးမဟာဗျူဟာများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, အကြံပေးချက်များသည်သင်၏ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်စေရန်သင့်ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုထိန်းညှိဖို့ကိုက်ညီစေရန်မည်သို့လုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကုန်သည်ကြီးများအတွေးအခေါ်တွေ DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
အဘယ်အရာကို Forex အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအလွန်အရေးပါသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် eBook တဦးတည်းကုန်သွယ်ဆုံးရှုံးမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေပပျောက်ပြီးအောင်မြင်သောကုန်သွယ်အစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန်အတွက်လိုက်နာရရန်အချက်များကိုဖော်ပြထားတယ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာစိတ်ပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဘယ်လို၏ခြေလှမ်းများကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားသည်။
ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှု DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
ဤသည် eBook ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုပြည့်စုံ၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြတယ်။ ဥပမာမှတ်တိုင်များသည့်ကုန်သွယ်အကောင့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုကယျတငျနိုငျဘယ်လိုအမှားအမှန်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ရလဒ်များနှင့်အကျိုးဆက်များပေးအဖြစ်ပါပြီ။
ဖြောင့်ထုတ်ယူခြင်းမှတဆင့် DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
အဆိုပါလက်လီ Forex စျေးကွက်မကြာသေးမီနှစ်အတွင်းပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအများအပြားပွဲစားအမျိုးအစားများပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ ဤသည် eBook ဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်ဤပုံစံ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှတဆင့် STP -Straight အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုအနိုင်ရရှိမှုထရေးဒင်း Plan ကို Build မှ DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
ကုန်သွယ်၏အရှိဆုံးအရေးပါရှုထောင့်တစ်ခုမှာတစ်ဦးချင်းစီဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အောင်မြင်မှု၏အမြစ်ကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်သည့်အပေါ်ကျောက်အစိုင်အခဲကုန်သွယ်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးသည်။ မည်သို့ပင်အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်ကို, ငါတို့သည်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့စွမ်းရည်ကိုသတ်မှတ်သို့သော်ရည်ညွန်းများနှင့်လိုက်နာရန်ကုန်သွယ်အစီအစဉ်မရှိဘဲကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာမှောင်မိုက်၌မြည်နှင့်ကျပန်း, ဆိုးဆိုးရွားရွားပညာတတ်ယူဆထားခြင်းမျှသာယူပြီးနေကြသည်။
နည်းပညာနှင့်အခြေခံအားသုံးသပ်ခြင်း DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
Stop အမိန့်များအသုံးပြုမှု DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
အဆိုပါ FX စျေးကွက်ခန့်မှန်းရခက်လှုပ်ရှားမှုများကိုရှိသည်ဖို့လေ့နှင့်တဦးတည်းကသူတို့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုဖျက်ဆီးဆီသို့ဦးတည်သွားစေမယ့်တစ်ခုတည်းသောကုန်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သကဲ့သို့အရပျ၌သင့်လျော်သောထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မှတ်တိုင်အမိန့်၏ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုအားဖြင့်သင်တို့၏ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။
သင့်ရဲ့ထရေးဒင်းအစီအစဉ် DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အစီအစဉ်ကသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ကြိုးပမ်းခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်ကိုထောကျပံ့မညျဖွစျကွောငျးအရေးပါသောဒြပ်စင်ဆံ့ဖို့ရှိပါတယ်, သင့်ကုန်သွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဲ့အခြေခံမူဖြစ်ပေါ်လာသော။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအစကတည်းကမှာအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးစာရွက်စာတမ်းဖြစ်မရှိပါ။ သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။
စျေးလှုပ်ရှားမှုထရေးဒင်း၏အခြေခံတစ်ခုမိတ်ဆက် DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
သူတို့ဇယားနှင့်အချိန်ဘောင်တွင်, အနည်းကိန်း, အရေးအပါဆုံးညွှန်းကိန်းအဖြစ်စျေးနှုန်းမှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများအပြားအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များက PA ဆိုပြီးကုန်သွယ်ထောက်ခံပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကကျောင်းအုပ်ကြီးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးဦးဆောင်ညွှန်ပြချက်မနောက်ကျညွှန်ပြချက်အတိုင်း, စျေးနှုန်းနှင့်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးသောစျေးနှုန်းအရေးယူမှတ်။
တစ်ဦးထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာအဖြစ် Scalping DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
ဦးရေပြားကုန်သွယ်တစ်အများကြီးဝျေါနှင့်လွဲစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကအတွေ့အကြုံကုန်သည်များလူတန်းစားကြောင့်ရိုးရိုးအချိန်တိုတောင်းသောကာလကိုကျော်, အသေးစား PIP အကျိုးအမြတ်ဘဏ်ကြိုးစားနေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤဖြစ်စဉ်အဖြစ် scalping ၏ဇစ်မြစ်တစ် mistranslation နှင့်ဖော်ပြချက်အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ကိုအခြေခံပြီးကုန်သွယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်း, အချိန်ကျော်ပြောင်းလဲထားပြီးဘယ်လိုဖော်ပြသည်။
ကုန်သွယ်စတိုင်အဖြစ်နေ့ကုန်သွယ် DOWNLOAD eBooks ဆက်ဖတ်ရန်
ကုန်သွယ်တဲ့စတိုင်နဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်, နေ့ကုန်သွယ်ကုန်သွယ်၏လူကြိုက်အများဆုံးစတိုင်များတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အဖြစ်နိုင်သည်လက်လီကုန်သည်အများစုတစ်ချိန်က (နှင့်လျှင်), နောက်ဆုံးမှာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ, ဒါမှမဟုတ်အထိရွှေ့ဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ကုန်သွယ်၏စတိုင်ကိုသူတို့ပြောင်းလဲနိုင်သည် နောက်ဆုံးတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်အကိုင်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရန်, မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပြည့်အဝအချိန်ရည်စူးပါသည်။
ယနေ့တွင်တစ်ဦးကိုအခမဲ့ ECN အကောင့်ကိုဖွင့်!
နိုင်ငံ အာဖဂန်နစ္စတန် အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဂျီးရီးယား အမေရိကန်ဆာမိုအာ အင်ဒိုရာ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အန်ဂွီလား ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ အာဂျင်တီးနား အာမေးနီးယား ယူးဘား ၾသစေတးလ် သြစတြီးယား အဇာဘိုင်ဂျန် ဘဟားမား ဘာရိန်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘာဘေးဒိုးစ ဘယ်လာရုစ် belize ဘီနင် ဘာမြူဒါ ဘူတန် ဘိုလီးဗီးယား၏ Plurinational ပြည်နယ် ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား ဘော့ဆွာနာ ဘရာဇီး ဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို ဘရူနိုင်း ဘူလ်ဂေးရီးယား Burkina Faso ဘူရွန်ဒီ ကမ္ဘောဒီးယား ကင်မရွန်း ကေနဒါ ကိပ်ဗာဒီ ကေမန်ကျွန်းစု ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ချဒ် ချီလီ တရုတ်နိုင်ငံ ကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများ ကိုလံဘီယာ ကော်မ္မရိုဇ့် ကွန်ဂို ကွန်ဂိုခြင်း, ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွတ်ကျွန်းစု ကော့စတာရီကာ Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire ခရိုအေးရှား ကျူးဘား ဆိုက်ပရပ်စ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ဒိန္းမတ္ ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ဒိုမီနီ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ အီကွေဒေါနိုင်ငံ အဲဂုတ္တုပြည်၌ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ အီရီထရီးယား အက်စ်တိုးနီးယား အီသီယိုးပီး ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (မာလ်ဗီး) ဖရိုးကျွန်းစု ဖီဂျီ ဖင်လန် ပြင်သစ် ပြင်သစ်ဂီယာနာ ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေ gabon ဂမ်ဘီယာ Georgia ဂျာမနီ ဂါနာ ဂျီဘရောလ် ဂရိနိုင်ငံ ဂရင်းလန်း နေးဒါ Guadeloupe ဂူအမ်ကျွန်း ဂွာတီမာလာ ဂါဇီး ဂီနီနိုင်ငံ ဂီနီဘစ် ဂိုင်ယာနာ ဟေတီ သန့်ရှင်းသောဘုရား See (ဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ်) ဟွန်ဒူးရပ်စ် ဟောင်ကောင် ဟန်ဂေရီ အိုက်စလန် အိႏၵိယ အင်ဒိုနီးရှား အီရန်၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ အီရတ် အိုင်ယာလန် လူသား၏ကျွန်း ဣသရလေ အီတလီ ဂျမေကာ ဂျပန် ဂျာစီ ယော်ဒန်မြစ် ကာဇက်စတန် ကင်ညာ ကီရီဘာတီ ကိုရီးယား, ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကိုရီးယား, သမ္မတနိုင်ငံ ကူဝိတ် ကာဂျစ္စတန် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လတ်ဗီးယား လေဗနုန်တော လီဆိုသို လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ လစ်ဗျားအာရပ် Jamahiriya လီချင်စတိန်း လစ်သူ လူဇင်ဘတ် မကာအို မက်ဆီဒိုးနီးယား၏ယခင်ယူဂိုဆလပ်သမ္မတနိုင်ငံ ဒါဂတ်စကာ မာလာဝီ မေလးရွား မော်လ်ဒိုက် မာလီ မော်လ်တာ မာရှယ်ကျွန်းစု မာတီနစ် Mauritania မောရစ်ရှ မာယော့တ် မက္ကစီကို Micronesia ၏ပဒေသရာဇ်စတိတ် မော်လ်ဒိုဗာ, သမ္မတနိုင်ငံ မိုနာကို မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး မွန်ဆာရတ် မော်ရိုကို မိုဇမ်ဘစ် ျမန္မာႏုိင္ငံ နမီးဘီးယား Nauru နီပေါ နယ်သာလန် နယ်သာလန်အန်တီ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား နယူးဇီလန် နီကာရာဂွာ နိုင်ဂျာ နိုင်ဂျီးရီးယား နီယူး Norfolk ကျွန်း မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ ေနာ္ေဝး အိုမန် ပါကစ္စတန် ပလောင်း ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကို, သိမ်းပိုက် ပနားမား ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ ပါရာဂွေး ပီရူး ဖိလစ္ပုိင္ Pitcairn- ပိုလန် ပေါ်တူဂီ Puerto Rico ကာတာနိုင်ငံ Reunion R union ရိုမေးနီးယား ရုရှားပြည်ထောင်စု ရဝမ်ဒါ စိန့်ဘာသာလီမီ စိန့်ဟယ်လီနာ, တက်မြန်းသည့်နေ့များနှင့်ထရစ်စ da Cunha စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် စိန့်လူစီယာ စိန့်မာတင် (ပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်း) စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန် စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း ဆာမိုအာ ဆန်မာရီနို စဝ်တုန်နှင့်ပရ ဆော်ဒီအာရေဗျ senegal ဆားဘီးယား seychelles ဆီယာရာလီယွန် စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဆလိုဗက်ကီး ဆလိုဗေးနီး ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ဆိုမာလီယာ တောင်အာဖရိက တောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစု စပိန် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဆူဒန် ဆူရာနမ် Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayen ဆွာဇီလန် ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ဆွစ်ဇလန် ဆီးရီးယားအာရပ်သမ္မတနိုင်ငံ ထိုင်ဝမ်တရုတ်ပြည်နယ်ရှိ Tajikistan တန်ဇန်းနီးယား၏ယူနိုက်တက်သမ္မတနိုင်ငံ ထုိင္းႏုိင္ငံ အရှေ့တီမော တိုဂို အဘိဓါန် Tokelau Tonga ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို တူနီးရှား ကြက်ဆင် တာ့ခ်မင်နစ္စတန် တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများ Tuvalu ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ယူကရိန်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ဥရုဂွေး ဥဇဘက် ဗာနူအာ ဗင်နီဇွဲလား၏ Bolivarian သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ် Virgin Islands, ဗြိတိန် Virgin Islands, အမေရိကန် Wallis နှင့် Futuna- အနောက်တိုင်းဆာဟာရ ယီမင် ဇမ်ဘီယာ ဇင်ဘာဘွေ
ဖွင့် ACCOUNT ကို NOW က